कोरोना भाइरस ~रोकथाम~को बारेमा तथ्यहरू | COVID-19 多言語情報ポータル
भाइरसको बारेमा हुने गलत हल्लामा दोधार नहुनुहोस्! -त्रास हुने अधिकार र रोकथाम अधिकार-
नोभेल कोरोना भाइरस विश्वको प्रत्येक कुनामा फैलिएको हुनाले र मानिसहरू यसबारे चिन्तित भएको हुनाले, सधैँ सत्य नहुने समाचार वा हल्लाहरू वरिपरि भइरहेका हुन्छन्।
हामी तपाईंलाई संक्रमण रोकथामको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउँछौँ जसकारण तपाईंले हेर्नुभएका सबै जानकारीमा तपाईंले विश्वास गर्नुहुन्न र त्यसपछि गलत समाचारहरू फैलाउनुहुन्छ र गलत कदम चाल्नुहुन्छ।
*यो अनुच्छेद WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) र तथ्य-जाँच पहल जापान (FIJ) द्वारा उपलब्ध गराइएको जानकारीमा आधारित छ
1. तपाईंले घाम ताप्नुहुन्छ वा तपाईं 25°C वा सोभन्दा बढीको तापक्रममा अनावरण हुनुभएको छ भने पनि, तपाईंले नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न सक्नुहुन्न।
मौसम राम्रो भएपनि र तापक्रम उच्च भएपनि तपाईं नोभेल कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ। वास्तवमा, न्यानो हुने देशहरूमा COVID-19 पुष्टि भएका मामिलाहरू छन्। पहिलो स्थानमा, सामान्य मानव शरीरको तापक्रम 36.5 देखि 37 C° सम्मको दायरामा हुन्छ; त्यो भन्दा न्यूनतम तापक्रममा भाइरस मर्दैँन।
साथै, भाइरस न्यानो र हुमिड क्षेत्रहरूमा फैलदैँन र चिसो हावा र हिउँले भाइरसलाई मार्न सक्छ भन्ने कुरा गलत हो।
2. तपाईंले तातो पानी पिउने भएपनि, तपाईंले नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न सक्नुहुन्न।
विश्वको प्रत्येक कुनामा, ”भाइरसहरू तापको विरूद्धमा कमजोर हुन्छन्, तपाईंले 26~27-डिग्री तातो पानी पिउनुहुन्छ भने तपाईंले संक्रमण रोक्न सक्नुहुन्छ भनी भनिएको छ।” वा ”तपाईंले तातो पानी पिउनुपर्छ भनी सिफारिस गरिएको छ”, तर यी कुराहरू गलत हुन्। सामान्यतया, भाइरसहरू तापको विरूद्धमा कमजोर हुन्छन् तर अनिवार्य रूपमा यसको मतलब तिनीहरू अब उपरान्त सक्रिय हुँदैनन् भन्ने होइन भन्ने कुरा पत्ता लगाइएको छ।
यसैगरी, तपाईंले तातो स्नान वा शावर लिएर नोभेल कोरोना भाइरसबाट आफूलाई सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्न।
3. ह्याण्ड ड्रायरले नोभेल कोरोना भाइरसलाई मार्दैन।
महत्वपूर्ण कुरा भनेको अल्कोहलयुक्त ह्याण्ड रब वा साबुनले बारम्बार आफ्ना हातहरू धुनु हो। ह्याण्ड ड्रायर मार्फत आफैंले भाइरस सङ्क्रमण रोकिँदैन, यो तपाईंका हातहरू धोएपछि टावेल वा ड्रायरले आफ्ना हातहरू सुख्खा बनाएर सङ्क्रमण रोक्नको लागि प्रभावकारी हुन्छ।
4. तपाईंले आफ्नो शरीरमा कीटाणुनाशक वा ब्लिच छर्किए पनि, तपाईंले नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न सक्नुहुन्न।
तपाईंले कीटाणुनाशक वा ब्लिच छर्कनुहुन्छ भने, यसले तपाईंको छाला वा आँखामा गम्भीर खराबी निम्त्याउँछ। साथै, कुनै पनि अवसरद्वारा तपाईंको शरीरमा रसायनहरू जान्छ भने यो एकदमै खतरनाक हुन सक्छ।
तपाईंले यी रसायनहरूको उचित तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ।
5. तपाईंले मदिरा पिउनुहुन्छ भने पनि, तपाईंले नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न सक्नुहुन्न।
अर्थात्, बारम्बार/अधिक रूपमा अल्कोहल पिउनु तपाईंको स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन।
6. तपाईंले नखोकीकन वा असहज महसुस नगरिकन दश सेकेण्डभन्दा बढी समयसम्म आफ्नो श्वास रोक्न सक्नुहुन्छ भने पनि, यो संक्रमण भएको छैन भन्ने प्रमाण होइन।
नोभेल कोरोना भाइरसका धेरैजसो सामान्य लक्षणहरू खोकी लाग्ने, थकान र ज्वरो आउने भनिएका छन्। चिकित्सा जाँचले मात्र संक्रमण पुष्टि गर्न सक्छ, श्वासप्रश्वास परीक्षणले होइन।
7. नोभेल कोरोना भाइरस माखा वा लामखुट्टेद्वारा सर्दैन।
मितिमा, त्यहाँ कुनै पनि समाचारहरू वा वैज्ञानिक प्रमाण छैनन् जसले नोभेल कोरोना भाइरस भएका माखा वा लामखुट्टेहरूलाई देखाउँछ। भाइरस खोकी, हाच्छिउँ वा कुरा गर्दा निस्कने छिँटाहरू मार्फत फैलन्छ। यसका अतिरिक्त, तपाईंले भाइरस भएका कुराहरू छोएर आफ्ना हातहरू नधोइकन आफ्ना आँखाहरू, नाक वा मुखमा छुदा तपाईं कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ।
8. हल्लाहरूले भन्दछ कि निश्चित खाद्य सामग्री र पेयपदार्थहरू संक्रमण रोकथामका लागि प्रभावकारी हुन्छन् तर यीमध्ये कुनै पनि वैज्ञानिक प्रमाण होइनन्।
कुनै पनि कारणले गर्दा कुनै पनि प्रमाण छैन भने पिरो खुर्सानीहरूले नोभेल कोरोना भाइरसलाई रोक्न वा निको पार्न सक्छन्।
त्यहाँ नोभेल कोरोना भाइरस रोक्नको लागि प्रभावकारी हुने निश्चत प्रकारका सिविडहरू, समुद्रि लेटुस देखाउने कुनै पनि विश्वसनीय ढङ्गले वा राम्ररी ग्राउण्ड गरिएका अनुसन्धानका नतिजाहरू पनि छन्।
साथै, केहीले चिया (वा ग्रिन टि) पिउनाले संक्रमण रोकथम हुन्छ भनी भनेका छन्, साथसाथै ग्रिन टि मा निरोधक भाइरसहरूका लागि प्रभावकारी हुने सामग्री हुन्छ भन्ने सम्भावना छ, अहिलेसम्म कुनै अनुसन्धान नतिजाहरूले यसको ल्याब वा मानव शरीरमा वास्तविक प्रभाव प्रमाणित गरेको छैन।
यसका साथै, लसुन खानाले नोभेल कोरोनाभाइरस रोकथाम गर्नका लागि प्रभावकारी हुन्छ भनी केही जानकारीको स्रोतहरूले भन्छ, तर त्यसको लागि कुनै वैज्ञानिक आधार छैन।
साथै, नोभेल कोरोनाभाइरस रोकथाम गर्नको लागि भिटामिन-D प्रभावकारी छ र त्यसले भिटामिन-D कमी भएको मानिसलाई संक्रमण गर्छ भनी तपाईंलाई हल्लाहरूको संख्याले भनेको छ, तर त्यहाँ अहिलेसम्म कुनै यस्तो प्रभावहरू निश्चित गरेको छनै भनी राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्था र पोषणले रिपोर्ट गर्यो।
त्यसैले, हामीले रोकथामको लागि के गर्नुपर्छ?
संक्रमण रोकथाम गर्नको लागि, अन्य मानिसबाट दुरी कायम राख्न उपयोगी र उचित छ, तपाईंले बारम्बार छुनुभएको वस्तु वा स्थानहरू सेनेटाइज गर्ने र तपाईंको हातहरू अल्कोहलयुक्त ह्याण्ड रब वा साबुनले तुरून्तै धुने। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफ्नो आँखाहरू, नाक, मुख वा तपाईंको अनुहारको अन्य भागहरू नछुनुहोस्। कृपया आफ्ना हातहरू कसरी धुने वा संक्रमण नफैलाउनको लागि तपाईंले कस्ता प्रकारका स्थानहरूबाट टाढा रहने बारे हाम्रो अन्य लेखहरूमा अपील गर्नुहोस्।
पढेर र राम्रो संक्रमण रोकथाम गर्ने उपायहरू लिएर, आफैँलाई र नोभेल कोरोनाभाइरस विरूद्ध हाम्रो प्रियतम मानिस चौकीदारलाई मद्दत गरौँ!
तपाईंले नोभेल कोरोनाभाइरस बारे कुनै हल्ला सुन्नुभयो भने वा यो सही हो वा होइन भनी तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने, कृपया निम्न वेबसाइट जाँच्नुहोस्।
→ यो वेब पृष्ठले विश्वव्यापी रूपमा-फैलाउने हल्लाहरू, नक्कली समाचारहरू र नोभेल कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित सही जानकारी सङ्कलन गर्छ। लेखहरू अंग्रेजी, फ्रेन्च, स्पेनी, चिनियाँ, रसियाली र अरबीमा उपलब्ध छन्।
तथ्य-जाँच पहल जापान (FIJ) द्वारा जानकारी समीक्षा गरियो।
→ जापानमा कुनै अनिश्चित हल्ला र समाचारहरू फैलाउने मध्य, यो वेबसाइटले जापानको मिडिया स्रोतहरू भित्र र बाहिरबाट तथ्य-जाँच गरिएको जानकारी प्रकट गर्छ। तपाईंले यसलाई जापानी र अङ्ग्रेजी भाषामा हेर्न सक्नुहुन्छ।